Fantaro ny zava-drehetra momba ny andron'ny tsy fisian'ny herisetra - The March World
Fantaro ny momba ny andro tsy fisian'ny herisetra
Home » Fantaro ny momba ny andro tsy fisian'ny herisetra
Ny herisetra nampiasaina ho fitaovana hamahana ny fifandirana sasany nandritra ny tantara dia niteraka olana goavana teo amin'ny fiaraha-monina misy eo amin'ny kolontsaina sy ny kolontsaina samihafa. Amin'izao fotoana izao, ireo fikambanana isan-karazany dia miasa isan'andro isan'andro mba hampiroboroboana ny fahitana ny vondrona samihafa mamorona hetsika toy ny andro tsy miankina ary andro mitovy amin'izany, mifandraika amin'ny lohahevitra. Mandritra ny taona iray dia afaka mahita andro samihafa izay mikendry ny hahatsapa ny olana izay mila fahitana. Amin'ireo andro mifandraika amin'ny herisetra dia afaka mahita ny hevi-dehibe toy ny andro iraisam-pirenena momba ny tsy fanaovana herisetra.
Ny tantara dia novolavolaina noho ny ady, ady sarotra sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Ny fanjakana dia noforonina noho ny fanafoanana ny vahoaka, ny fanitsakitsahana ny fahalalahana ary ny fanandevozan'ny fiainana olombelona. Arakaraka ny vanim-potoana ara-tantara no sandoka sivilizasiona hafa rafitra fitantanana sy ny fampahoriana, ary na dia eo amin'ny dingana maro voafaritra eo amin'ny kolontsaina no nanjary vatana ho amin'ny fampiroboroboana ny zo, dia efa foana ny vondrona izay nitoetra ivelan'ny ara-dalàna sisim-pejy, ka mahatonga fanilikilihana sy herisetra mihatra amin'izy ireo.
1 Inona avy ireo andro manan-kery tsy misy herisetra?
2 2 Oktobra: Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana
2.1 Nahoana no andro tsy fiatrehana sy fiadanana?
3 Ny andro 25 ny andro tsy fiantohana ny vehivavy
3.1 Ny anton'ilay fisian'io daty io: Andro 25 ny andro tsy fiandaniana amin'ny vehivavy
3.2 Nahoana no mamporisika ny fankalazana ny tsy fahaiza-mandavanan'ny andro 25 ny volana Novambra?
4 Ny andro faha-30 andro tsy miankina sy ny fandriam-pahalemana
4.1 Nahoana no nankalaza ny 30 tamin'ny volana jolay tany an-tsekoly ny andron'ny tsy fahazakana sy ny fandriampahalemana?
5 19 Novambra izao tontolo izao tsy misy herisetra mihatra amin'ny ankizy sy ny tanora
5.1 Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana sy ny fisorohana ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanorisorenana
5.2 Indeksan'ny herisetra ankizy
6 Fanambarana farany amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny herisetra atao amin'ny tsy fanaovana herisetra
7 Espaina mitarika ny diabe manerantany ho an'ny andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fisian'ny herisetra
Inona avy ireo andro manan-kery tsy misy herisetra?
Fifandraisana ara-tsosialy mifandraika amin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana Misy maro. Ary andro maro tsy misy herisetra ao amin'ny kalandrie, mifantoka amin'ny sehatra samihafa ao amin'ny sehatra samihafa, toy ny:
Ny andron'ny tsy fahazoana zaza tsy ampy taona
Ny andron'ny 25 amin'ny tsy fisian'ny herisetra atao amin'ny vehivavy
Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana, miorina amin'ny 2 ny volana Oktobra
Ny 30 tamin'ny volana janoary, andron'ny tsy fahampian-tsasatra izay tsy tokony hifangaro amin'ny andron'ny tsy fahazoana zaza tsy ampy taona
Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy fihinanan-kanina sy ny fandriam-pahalemana.
Mihitsy aza izy ireo miasa eo amin'ny sehatra samy hafa ny ady izy, dia hampifantoka ny ezaka amin'ny ady amin'ny herisetra amin'ny sehatra samihafa, ary manana tanjona iraisana: ny mety hisian'ny herisetra hamaranana izay fanao misy eo amin'izao tontolo izao, manampy fiadanana hahatratra rehetra ny zoron'ny planeta, ary noho izany ny olom-pireneny dia manana zo sy adidy mitovy
2 Oktobra: Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana
Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana ny fankalazana ny October 2 dia fotoana fohy fankalazana ny nahaterahan'i Mahatma Gandhi. Ary ny filozofia an'i Gandhi dia mifototra amin'ny fampiasana fifanakalozan-kevitra amin'ny famahana ny olana.
Io no 15 tamin'ny volana Jona tamin'ny taona 2007, raha nanambara tamin'ny alalan'ny resolution 61 / 271 ny Fivoriambe nataon'ny Firenena Mikambana, fa ny andro tsy voafetran'ny 2 volana oktobra. Ny andron'ny tsy fisian'ny herisetra no nampiasaina ho toy ny fijerena izao tontolo izao ho fankalazana ireo olona malaza maro izay niady nandritra ny androm-piainany mba hahatratrarana ny fiarahamonina marina kokoa.
Nahoana no andro tsy fiatrehana sy fiadanana?
Ny kolontsaina izay mamolavola ny Andro Erantany momba ny tsy Fahampiana dia mifantoka amin'ny ady amin'ny zo sivily sy fiovana ara-tsosialy, satria ny tanjona dia ny mitahiry ny fiainan'ny olombelona amin'ny fampiasana ny fandriampahalemana ho fitaovana.
Maro ny manontany tena hoe inona ny andron'ny tsy fisian'ny herisetra, ary nahoana no misy ny andro fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny herisetra. Ary araka ny manam-pahaizana dia manana Andro iraisam-pirenena momba ny tsy fihinanam-pirenena, dia manampy amin'ny fananganana fanentanana eran-tany momba ny fampiasana tafahoatra ny herisetra amin'ny famahana ny fifandirana eo amin'ny firenena sy ao anatiny.
Izany no antony mahatonga ny Andro faha 2 oktobra ho an'ny tsy fahazoana tombontsoa ho an'ny fikambanana isan-karazany amin'ny fitantanana ny hetsika izay mampiseho ny herisetra misy eto amin'izao tontolo izao, na mivantana na an-kolaka. Mba milaza izany andro tsy hiady mavitrika ianao dia afaka mandray anjara amin'ny diabe nokarakaraina manerana izao tontolo izao, na hiaraka fikambanana miasa ao an-trano mba hamoronana ny andro fiadanana sy tsy hiady amin'ny alalan'ny fampidirana fitaovana ary fanajana.
Noho izany antony izany, raha te-handray anjara amin'ny andro tsy fahaivan'ny volana 2 ianao amin'ny toe-javatra samihafa atao any an-tanàn-dehibe, dia tsara ny manatona fikambanana mifandray amin'ny andron'ny tsy filaminana sy ny fandriampahalemana ary manolo-tena hiasa ao amin'izy ireo.
Zava-dehibe ny hahafantarana ny daty, satria mahazatra ny manakantsakana ny fisainana fa andron'ny tsy fankalazana iraisam-pirenena amin'ny 2 ny volana Novambra, raha tsy maintsy manantitrantitra isika, fa ny 2 tamin'ny Oktobra. Ary indraindray ianao dia mahita fampahalalana diso ao amin'ny Internet izay mety hitarika ho amin'ny fisafotofotoana.
Ny andro 25 ny andro tsy fiantohana ny vehivavy
Ity lohahevitra ity dia iray amin'ireo manan-danja indrindra ary eo am-bavan'izao tontolo izao. Ny antony dia ny herisetra mifantoka amin'ny vehivavy dia iray amin'ireo fikomiana izay mahatonga ny fahasamihafana ho an'ny kolikoly handroso amin'ny firaisankina.
El 25 Novambra andro iraisam-pirenena manohitra ny herisetra atao amin'ny vehivavy, dia natao hanehoana ny endriky ny herisetra rehetra natao tamin'ity vondrona ity ary matetika no nohamavoina na nangina.
Ny anton'ilay fisian'io daty io: Andro 25 ny andro tsy fiandaniana amin'ny vehivavy
Ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia mirakitra fihetsika sy toe-javatra toy ny herisetra mihatra amin'ny herisetra, herisetra mihantsy, fanorisorenana, fanolanana na tsy fitoviana karama, ankoatra ny hafa.
Toe-javatra rehetra ireo no mitarika ny vehivavy dia raisina amin'ny fomba maro ambany raha oharina amin'ny lehilahy, na dia nomena anjara asa lahy sy ny vavy, satria fotsiny hoe vehivavy izy ireo, toy ny andraikitry ny mpikarakara na ny mpila.
Nahoana no mamporisika ny fankalazana ny tsy fahaiza-mandavanan'ny andro 25 ny volana Novambra?
Ny herisetra napetraka amin'ny vehivavy dia iray amin'ireo hetsi-panoherana indrindra, hiadiana amin'izany. Tamin'ny taona 1993, ny fanambarana momba ny fanafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy dia navoakan'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana. Ary heverina fa mba hampitsahatra ny fitakiana ny 25 andron'ny tsy filaminana sy ny fandriam-pahalemana ilaina ny hoe lahy sy vavy (izay maherin'ny antsasaky ny mponina eran'izao tontolo izao) dia miaina tsy misy tahotra, tsy misy herisetra an-trano, ao anaty fiaraha-monina azo antoka sy marina ho azy ireo.
Ary raha marina izany fa nanomboka tamin'ny 25 Novambra 2017 herisetra vao manomboka mahatsapa ny sasany fandrosoana eo amin'ny fanentanana ny amin'izany zavatra izany mandra-zo tsy tratra, maro no mihevitra fa tsy orinasa maneran-mandroso amim-pahamarinana sy tsy mitanila manoloana ny fitondran-tena, miorina amin'ny soatoavina ny hitsiny sy ny fandeferana.
Ny andro faha-30 andro tsy miankina sy ny fandriam-pahalemana
Ny Janoary 30 andro fiantsoana ny tsy filaminana sy ny fandriam-pahalemana Ny fankalazana ny fahafatesan'i Mahatma Gandhi, izay mpitarika nasionaly sy ara-panahy an'i India, dia ankalazaina. Ity andro ity dia ankalazaina amin'ny taona 1964, saingy tsy tamin'ny taona 1993 no nahafantaran'ny Firenena Mikambana izany.
El Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana 30, ireo hetsika isan-karazany dia atao any am-pianarana mba hampiroborobo ny fandriampahalemana eto amin'izao tontolo izao Ara-dalàna io andro fianarana tsy misy herisetra sy fandriampahalemana io, toy ny tantara momba ny fandriam-pahalemana sy ny tsy fahazakana, na hira mifandraika amin'ny fandriampahalemana koa dia mihira ary miteraka toe-javatra izay miaina eto amin'ny firenena na any amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao.
Nahoana no nankalaza ny 30 tamin'ny volana jolay tany an-tsekoly ny andron'ny tsy fahazakana sy ny fandriampahalemana?
Amin'ity andro ity dia misafidy ireo foibe fanabeazana mba hanatanterahana ireo hetsika samihafa amin'ny ankizy. Ireo andro ireo dia matetika atao mandritra ny ankizy sy ny dingana voalohany, ary ny tanjona dia ny hahafantaran'ireo ankizy kely ireo tarehimarika solontenan'ny hetsika tsy fisian'ny herisetra sy ny fandriampahalemana. Anisan'ireo endrika manandanja kokoa ny Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Reny Maria Teresa avy any Calcutta na Martin Luther King.
Zava-dehibe ny miasa miaraka amin'ny kely eran-andro tsy hiady hatramin'ny mbola kely, ary ny andro rehetra izay mandray anjara ao amin'ny fotoana mifandray amin'ny andro fiadanana sy tsy hiady, toy ny andro iraisam-pirenena manohitra ny herisetra 25 Novambra, ny 2 oktobra andron'ny tsy fahazakana ary ny fandriam-pahalemana na fianarana ny tsy fisian'ny herisetra sy ny fanorisorenana.
19 Novambra izao tontolo izao tsy misy herisetra mihatra amin'ny ankizy sy ny tanora
Ny November 19 dia ny andron'ny zaza tsy ampy taona, natao hampiseho ny fanararaotana natao tamin'ny tanora indrindra. Tamin'ny herintaona 2000 no nanondro androany ny androany mba hametrahana fepetra maika sy mahomby ataon'ny States. Ankoatra izany, ny fankalazana ny November 20 dia natao ho fahatsiarovana ny fiarahan'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Ankizy.
Amin'izao andro tsy misy herisetra atao amin'ny ankizy izao dia ampiasaina ny hanaitra ny sain'ny teknolojia mahazatra indrindra amin'ny fanararaotana zaza tsy ampy taona sy ny fitaovana azony ampiasaina hampiakarana ny lakolosin'ny olon-dehibe azo itokisana manodidina azy.
Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana sy ny fisorohana ny fanararaotana ara-nofo sy ny fanorisorenana
Ny fanararaotana sy ny fanararaotana ny ankizy sy ny tanora dia olana iray mahakasika ny firenena rehetra eran-tany. Ary io karazana herisetra io dia tsy manavaka ny firazanana, firenena, kolontsaina na fari-piainana sosialy.
ny ireo tranganà herisetra sy herisetra amin'ny tsy ampy taona Efa nanao jatony fikambanana sy ny governemanta rafitra manomboka handray andraikitra sy mampihatra ny rafitra fanabeazana sy ny akora, ka dia ireo toe-javatra ireo, ary dia toy izany no nampahafantatra mba hanorina protocols noho ny zavatra rehetra eny an-tsaha: ny fianakaviana, Foibem-pampianaran'ny faritra SY FIALAM-BOLY .
Indeksan'ny herisetra ankizy
Ny manam-pahaizana dia namorona lisitr'ireo fampiasana matetika izay hita amin'ny ankizy sy ny tanora rehefa mijaly na iharan'ny herisetra izy ireo:
Fahasembanana ara-batana: fahavoazana ho an'ny faritra akaiky, toy ny fandehanana ra, ny fiterahana na ny aretina.
Soritr'aretina marary: tahotra, phobias, ranomasimbe miverimberina, torimaso mangina. Ny fitondrantena tsy mendrika na ny fiverenana amin'ny fahaizana efa azony.
Fihetsiky ny firaisana ara-nofo, ny fikomiana miankina amin'ny fianakaviana sy ny sekoly, ny fahombiazan'ny academic poor.
Ity torolalana ity dia natao mba hahafahan'ny mpianakavy, namana na mpanabe hitan'ny tanora amin'ny soritr'aretina faran'izay kely indrindra raha tsy voatery mamaly azy ireo momba izany.
Fanambarana farany amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny herisetra atao amin'ny tsy fanaovana herisetra
Indrisy anefa, toa ny fotoana rehetra dia ny andro iraisam-pirenena herisetra, noho ny ady rehetra izay misy eo amin'izao tontolo izao sy izay rehetra fanararaotam-pahefana ao amin'ny fiaraha-monina rehetra, na dia heverina mandroso na tsia.
Miankina amin'ny kolontsain'ny firenena tsirairay sy ny fandrosoana na ny tsy fitoviana amin'ny zon'izy ireo, fa misy karazana herisetra samihafa azo jerena. Maro ny olona mety hieritreritra fa any amin'ny tany mandroso dia tsy ilaina ny mankalaza Andro manerantany hiadiana amin'ny tsy fisian'ny herisetra, satria mihevitra izy ireo fa tsy misy intsony izany na kely na mendrika.
Saingy indrisy fa ny mifanohitra amin'izany, ny herisetra dia ampahany amin'ny olombelona, ​​ary mba hamongorana dia ilaina aloha ny fanentanana ny fisiany, ary sary an-tsaina ny zavatra mivoaka toe-javatra, ary inona no heverina herisetra.
Espaina mitarika ny diabe manerantany ho an'ny andro iraisam-pirenena amin'ny tsy fisian'ny herisetra
Espaina dia firenena noheverina ho ny tontolo voalohany ao amin'ny fanjakan'ny demokrasia demokratika, miaraka amin'ny lalàm-panorenana izay miaro sy manome zo ho an'ny olom-pireneny rehetra.
Saingy ny marina dia nandritra ny tantara vao haingana indrindra teto amin'ity firenena ity dia nisy ny herisetra lehibe indrindra, sady mazava sy tsy misy dikany. Ny herisetra ao an-tokantrano (ny andron'ny herisetra amin'ny 25 ny volana novambra) dia iray amin'ireo fahasarotana lehibe izay manondraka an'ity fiarahamonina ity.
Izy ihany koa izay nonina dingana fampihorohoroana nandrahona ny fiainana andavanandron'ny mponina ao aminy. Anisan'ny hetsi-panoherana ny ambony indrindra momba izay efa mivantana sary an-tsaina efa 1 Oktobra herisetra izay nitranga tao Catalonia, noho ny fitsapan-kevibahoaka izay truncated ny mpitandro ny filaminana izay herisetra-keriny ny olom-pirenena. Noho izany, ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy fihinanam-be 2017 Tena zava-dehibe izany.
Raha mandinika fa Espaina dia iray amin'ireo fiaraha-monina mandroso indrindra, ary na dia teo aza izany, maro ny herisetra eo amin'ny zo sy fanomezan-toky ny olona no nataony, dia mora ny an-tsaina fa ny mitranga any amin'ny firenena hafa amin'ny ambaratonga ambany na tsy misy ny demokrasia na fatra tamin'ny ady.
Ho an'ireo antony rehetra ireo, misy ireo fikambanana izay mampiroborobo ny ady amin'ny zon'ny olona, ​​tahaka ny tranga Ny Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahazakana, izay miasa isan-taona isan-taona, manerantany amin'ny fampitam-baovao mba hanentanana ny olom-pirenena sy ny governemanta momba ny maha-zava-dehibe ny fampiasana herisetra.